Samachar Batika || News from Nepal » जान्नुहोस केही रहस्यमयी रत्नहरू : कोहीनूर र कौस्तुभ मणिको महत्व किन बढी ?
जान्नुहोस केही रहस्यमयी रत्नहरू : कोहीनूर र कौस्तुभ मणिको महत्व किन बढी ?
वेद, रामायण, महाभारत र पुराणहरूमा उल्लेख गरिएका धेरै विषयहरू अझै पनि रहस्यको पर्दाभित्र नै छ । पौराणिक कथामा सर्पको टाउकोमा रहने एउटा रत्नको बारेमा उल्लेख पाइन्छ । पाताल लोक त्यही मणिको आभाद्वारा हरेक समय चम्किने गर्छ भन्ने मान्यता पाइन्छ । सर्पराज वासुकीमा सबै प्रकारका रत्नहरूमाथि अधिकार छ भन्ने पौराणिक मान्यताछ । रत्न एक प्रकारको चम्किरहेको ढुंगा हो। मणिलाई हीराको कोटिमा राख्न सकिन्छ ।
पृथ्वीमा धेरै प्रकारका मोतीहरू हुन्छन् । तिनीहरूमध्ये केही अब फेला पर्न निकै मुस्किल मानिन्छ । ती दुर्लभ मणिहरूको बारेमा पनि पौराणिक कथन पाइन्छ । केही अझै फेला पर्नेमध्ये प्रमुख रत्नहरू निम्नानुसार छन् । घृत मणि, तेल मणि, भीष्मक मणि, उपलक मणि, स्फटिक मणि, पारस मणि, उलुका मणि, लाजावर्ट मणि, मसार मणि । तर कौस्तुभ मणि किन चामत्कारिक र रहस्यपूर्ण मानिन्छ ?
१. कौस्तुभ मणि समुद्र मन्थनको बेला उत्पन्न भएको मानिन्छ । पुराणका अनुसार समुद्र मन्थनको समयमा प्राप्त भएका १४ बहुमूल्य रत्नहरूमध्ये यो मणि पनि एक हो।
२. कौस्तुभ मणिलाई भगवान विष्णुले धारण गर्छन् भन्ने मान्यता हिन्दु शास्त्रमा पाइन्छ । यो धेरै बहुमूल्य रत्न हो।
३. जहाँ जहाँ यो रत्न हुन्छ, त्यहाँ कुनैपनि दैवी प्र’कोपले क्ष’ति पुर्याउँदैन भन्ने विश्वास पाइन्छ ।
४. विश्वास गरिन्छ कि यो मणि अझै पनि समुद्री सतहमा फेला पर्न सक्छ।
५. यो रत्नले सबै किसिमका खतराहरूबाट जोगाउँछ भन्ने मान्यता छ।
यसबाहेकका अन्य ९ रहस्यमयी मणिहरू निम्नानुसार छन् ।
अहिले चन्द्रकान्ता मणिको नाममात्रै पाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता छ । यो मणि लगाउँदा भाग्य बढ्छ भन्ने पूर्वीय मान्यता छ। कुनै पनि प्रकारको गम्भीर दु’र्घटनाबाट बच्न, वैवाहिक जीवनमा खुसी ल्याउनको लागि यो मणि सहायकसिद्ध हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।
स्यामन्तक मणिलाई इन्द्रदेवले धारण गर्छन् भन्ने मान्यता पाइन्छ । भनिन्छ कि प्राचीन समयमा कोहिनूरलाई स्यामन्तक मणि भनिन्थ्यो। धेरै स्रोतका अनुसार कोहिनूर हीरा करिव ५ हजार वर्ष पहिले फेला परेको थियो । यो प्राचीन संस्कृत इतिहासमा लेखिए अनुसार स्यामन्तक मणि भनेर प्रख्यात थियो। कोहिनूर हीरा संसारका सबै हीराहरूको राजा मानिन्छ ।
स्फटिक मणि चम्किलो सेतो रंगको पदार्थ हो । यो सजिलैसँग भेटिने मणि हो । यद्यपि यसको मूल अनुसन्धान गरिनु जरुरी छ । हिजोआज धेरै व्यक्ति स्फटिकको मोती लगाउँछन्। यो मणि लगाउने आफ्नै विशेष नियमहरू छन्, अन्यथा यो हा’निकारक पनि हुन सक्छ ।
यस मणिको रंग मयूरको घाँटी जस्तो हुन्छ । निलो र कालो रंगको सुनौलो रंगको प्वालसहितको यो रत्न पनि विरलै पाउने मणिहरू हुन् । सुन्दर रत्न धारण गर्दा शक्ति, बुद्धिमत्ता र प्रसिद्धि बढ्छ भन्ने विश्वास पाइन्छ ।
उलूक मणिको बारेमा भनाइ छ कि यो रत्न उल्लू चराको गुँडमा पाइन्छ। यद्यपि कसैले यो देखेको छैन। यो रंगमा हिलो
जस्तो हुन्छ ।
प्रकाशित मिति १ चैत्र २०७७, आईतवार ०२:३६